90,000 hackers na-anwa ịbanye na nwụnye WordPress gị ugbu a. Nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ jọgburu onwe ya mana ọ na-arụtụ aka na ewu ewu nke usoro njikwa ọdịnaya ụwa kachasị ewu ewu. Ọ bụ ezie na anyị amaghị nke ọma gbasara sistemụ njikwa ọdịnaya, anyị nwere nkwanye ugwu miri emi maka WordPress ma kwado ọtụtụ nrụnye nke ndị ahịa anyị.
Anaghị m ekwenye na ya onye guzobere WordPress onye na - egbochi uche na nsogbu nchekwa na CMS. Ọ bụ ezie na ndị folks nwere ike ịgbanwe nbanye nchịkwa ha site na nchịkwa, uru kasịnụ nke WordPress bụ kemgbe 1-wụnye. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ka ha gbanwee nbanye, nke ahụ karịrị 1 pịa!
Ebe nrụọrụ WordPress gị na nchekwa WordPress gị dị mma dị ka akụrụngwa ọ wuru ma dị ka mmepe nke isiokwu na plugins ị tinyere. Adịla ụta WordPress… chọta onye nrụpụta ọhụụ na ebe ọhụụ iji nọrọ ya nwee!
Tags: acfelu omenala ubiOmenala wordpress gburugburuife efeụdị ndọdandị mmekọ na ihe ịga nke ọmandị mmekọ ọnụ ọgụgụigbe igbewordpress mmepewordpress hackedakwụkwọ ntinye akwụkwọnchekwa nchekwaweta